Shoe Oo Leather Shaqaalaha Oo Repairers Job Description / Doorarka Oo Sample Xisaabtanka - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Shoe Oo Leather Shaqaalaha Oo Repairers Job Description / Doorarka Oo Sample Xisaabtanka
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 849 Views
urursada, jiidaan, ama soo celin maqaar iyo maqaar-sida alaabta, sida tusaale ahaan Alaabtoodii, kabaha.
Iska yaree Hababka baxay xaq in ay yihiin kuwa ku xiga, xubno ama sharaxayaa, codsanaya maqas, shears, mindiyo, ama qasabno mashiinka.
In la sameeyo, embellish, ama soo celiyo wax soo saarka maqaar sida-ka muuqaalada, isticmaalaya cirbadaha tolo oo bond, qalabka kaba, dhegi qalabka gacanta, ama rivets.
Diyaarso iyo koolo ama tolaa khayraadka sida alwaax, ama qalabka, dhogor, buckskin, si ay uga qayb meelaha.
color, khayraadka kala duwan si ay u leeyihiin natiijada in ay yihiin la doonayo ama saturate, horumarinta, midabaynta, -saxaafadeed, tolo, calaamadi ama ku xaradhaa maqaar, muuqaalo, ama naqshado.
sahay Select iyo naqshadaha, iyo qaababka raad gal alaabta in ay cutout.
Dhar iyo sida caadiga ah dhamaystiran kabaha sida by falinjeeerka cidhifyada imtixaan cusub oo u gaddoomaysaan Cidhibtiinii dhinaca xaalad kabaha ku.
Qiyaas kharashka adeegyada ama wax soo saarka wax weyddiiyey oo ay ku jiraan kabuhu kartoo ama kabo dayactirka, iyo aad u hesho qiimaha macmiilka.
Ku dar insoles in kabaha sii, geliyey kabo fuliyo bambooyin iyo outsoles, iyo uppers.
Cement, ciddi, ama tolaa Cidhibtiina iyo guntooda in kabaha.
Cidhibtiina Form kabaha mindi, iyo dhoobo, kuwaas oo in ka badan wheel buffing for dhamaado a.
Soo Celinta ama isbedel shubmo cagaha, oo ay la socdaan qaybaha kale ee kabuhu kabaha, codsanaya sahay, tolo, buffing iyo aaladaha kale ee dayactirka boot, iyo marsho.
Abuur, beddelo, iyo dayactiro kabaha kulul ama dib u soo celinta waafaqsan dhakhaatiirta’ xal, ama tifatir kabuhu joogo la siiyo dadka qaba specialneeds iyo arrimo aad cagaha.
Recondition iyo dayactiro waxyaabaha for tinaarka tusaale ahaan kubadda cagta, oo dogob, bacaha, kabaha, saddles, suumanka, boorsooyinka.
kabaha Place on sii wadaan in ay ka saarto u gaddoomaysaan Cidhibtiinii oo imtixaan, isticmaalka kelbed ama mindiyo.
Nadiifiya iyo horumarinta kabaha.
Hubi texture maqaar ee, hooska, iyo cimri dherer si loo hubiyo in ay tahay Jashiisu yahay shaqo ah oo kala duwan.
Imtixaan xal ama caddaymaha, oo waxay qaadan doonaan cabbir si loo ogaado nooca wax soo saarka si loo abuuray, shaqaalaynta calipers, falalka cajalad, ama mabaadi'da.
Imtixaan articles waayo, ayna duleella, iyo saaro meelaha loo isticmaalo ama la waxyeeleeyey, isticmaalka gacanta qalab.
Caadiga ah ama mudaaharad jeebka iyo socosho ama xirmaan dahabka steel, maamushaa .
Ku lifaaq farshaxanka ama qaybaha inay soo jiidaan ama waxyaabaha waardiyayaasha.
xaaladda, jeex, gelin, iyo paddings aamin, kursiga, ama qaabab, codsanaya ama ul, ama ku biiray.
caddaymaha Consumer, oo soo kala tilmaamaan ama nidaamyada meelaynta on qaybo shaqo, wasakhahaasi Malaas, ama keenaan qaababka, iyadoo la isticmaalayo cabbir, Hababka.
Qiimee iibsada waayo joog, iyo la hadashaa nooca kabaha si ay u noqdaan dhisay, macluumaadka soo jeediyay ay ka mid yihiin tayada maqaar.
kordhisayna kabaha, oo ay ku jiraan oo laabma iyo dampening xabbadood qaybo, isticmaalka kala jar ah oo hagaajin karo.
cleats ciribta-iyo-lugo caguhu gal kabaha.
samee jagooyinka, pads ciribta, oo uu jiidayo ka cadaynaysaa ee macaamiisha’ feet.
goysyada Resew, iyo bedelo qaabab iyo cinwaanada totes ama boorsooyinka.
Waxqabadka Career Horudhac ah
Akhrinta cutubyada Aqoonta-Aqoonta iyo cutubyada ku qoran waraaqaha la xiriira shaqada.
Active-Dhageeysi-bandhigo waxa ay dadka kale caddayn dareenka oo dhan, waqtiga iyo tamarta si ay u fahmaan faahfaahinta helitaanka lagu dhigay, yaabban arrimaha sida ku haboon, halkii mesmerizing waqtiyo aan sax ahayn.
Qorista-On warqad sida saxda ah ee looga baahan yahay ka mid ah dhagaystayaasha hadalka ku ool ah.
Ka hadalka-hadalka dadka kale wadaagin wax ku ool ah.
Xisaab-Adeegsanaya xisaabta si uu u xaliyo dhibaatooyinka.
Hababka Technology-Adeegsanaya iyo mabaadiida lagu daawayn si loo xaliyo dhibaatooyin.
sabab iyo sabab u ah in la aqoonsado awooda iyo duleella natiijada Criticalthinking-Adeegsanaya, daawooyinka kale ama siyaabo arrimaha.
lugaha Learning-Aqoonta macluumaad cusub firfircoon ee mustaqbalka kasta iyo ugu dambeeyay xalinta dhibaatada iyo go'aan-qaadasho.
Barashada Xeeladaha-shaqaalayn iyo qaadaaya habab educationORinstructional iyo farsamooyinka haboona tababarka dhibaatada ama marka hanashada arrimaha cusub.
shaqeynta Tracking-CheckingORDetermining dadka dheeraad ah, qofka, ama shirkadaha ka fiirsan falalka sixid ah ama in ay curiyaan horumarka.
Social Perceptiveness-Ahaanshaha ma ah mid halmaansan reactions othersI sababta ay u dhaqmaan maxaa yeelay waxay u sameeyaan iyo aqoonta.
Salesmanship-dawarsanayay dadka kale in la beddelo dhaqanka ama fikirradooda.
Dood-Siinta kuwa kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanaansho.
Teaching-wacyi galiyo dadka kale sida in ay tallaabo qaadaan.
Adeegyada Orientation-dadaal ku raadinayaan xeelado si ay u taageeraan shakhsiyaadka.
Advanced Mushkiladaha-Aqoonsiga arrimo aad u adag iyo dib u info in la xiriira u qiimeeyaan iyo in ay soo saaraan fursadaha iyo codsan jawaabo.
baahida iyo caddaymaha soo saarka Hawlgallada Research-barashada si ay u sameeyaan qaabka a.
Engineering Design-Technologies si ay u caawiyaan qofka iyo qabsado waxyaabaha ama baahida dhismaha.
Qalabka Selection-Go'aansiga nooca qalab iyo qalabka loo baahan yahay si dhab ah in la sameeyo shaqo.
qalabka Rakibaadda-xiridda, alaabta, taararka, ama baakadaha si ay ula kulmaan caddaymaha.
codsiyada computer Barnaamij-saaridda ku saabsan isticmaalka in tiro badan yihiin.
Hawlgallada Tracking-kuurgalo calaamooyin kale oo, dials, ama imtixaanka si loo hubiyo in qalabka wax ku ool ah ka shaqeeya.
Operation iyo Maamul-hortagga hawlaha barnaamijyada ama alaabta.
Qalabka Dayactirka-Bandhigyada dayactirka joogtada ah ee marsho iyo go'aan goorta iyo waxa sort of daryeelka loo baahan yahay.
Dhib-Go'aaminta sababaha dhibaatooyinka ay ka shaqeeyaan iyo doorashada waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan wax kasta oo ka mid ah.
qalabka ama makiinadaha isticmaalka qalabka lagama maarmaanka ah si qamaar-qamaar.
baaritaannada iyo tijaabooyinka alaabta Tayada-Control Research-Sameynta, adeegyada, ama nidaamyada si ay u qiimeeyaan wax ku oolnimada iyo tayada.
faa'iidooyinka iyo eedeeyay qaraabo dhaqanka in ay yihiin la filayo in la helo mid ka mid ah in uu yahay haboon Xukun iyo Go'aan ka qaadashada ku-la tixgaliyo.
bedelida Falanqaynta-Go'aaminta waxa sort of nidaamka waa in ka shaqeeyaan iyo sida nidaamka, xaaladaha, iyo meesha saameyn ku yeelan karaa gargaarka.
Hababka Qiimeynta-Aqoonsiga tallaabooyinka ama tilmaamayaasha waxqabadka iyo iyadoo la raacayo oo gaashaan oo mashiin ku haboon ama dabeecada loo baahan yahay si dhab ah si kor loogu qaado waxqabadka.
dadka kale Time Management-Xakamaynta’ muddada iyo sidoo kale oneis muddo gaarka ah.
Maamulka Financial Resources-Go'aansiga sida lacag shaki la'aan waxaa loo isticmaali doonaa si ay u leeyihiin shaqada ay qabanayaan, iyo iibka ku saabsan kharashyada kuwan.
Management of Waxyaabaha Hantida-In qofka oo arkaya isticmaalka saxda ah ee adeegyada, qalabka, iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Maamulka Khayraadka Shaqaale-dhiirrigelin, abuuraya, oo tilmaamaya dadka halka ay ku shaqeeyaan, kala ah dadka ugu wanaagsan ee mustaqbalka.
Heerka Dugsiga Sare (ama GED ama Senior High School Certificate isu-)
Qaar ka mid ah Training College
Cadaato in ka yar Heerka Dugsiga Sare
Guulaha / day – 81.57%
Tenacity – 77.67%
dadaal – 81.07%
Iskaashiga – 87.66%
Arrinta ku saabsan Kuwo kale – 85.96%
Direction Cultural – 83.75%
Is Control – 78.55%
Dulqaadanayn Stress – 78.61%
halaynta – 90.41%
Wacyigelinta ee Details – 85.99%
xoog – 84.88%
Liberty – 85.84%
war abuurashadoodii – 78.19%
Adoo ka fakaraya Analytical – 76.01%